Imaaraadka Carabta iyo Iiraan oo yeeshay wadaxaajoodyo dhif ah
Imaaraadka Carabta iyo Iiraan oo yeeshay wadahadalo dhif ah
Abu Dhubi, oo gacansaar la leh Mareykanka, iyo Tehran ayaa madaxa iskula jiray bilooyinkii lasoo dhaafay.
MUQDISHO, Soomaaliya – Wasiiradda arrimaha dibadda ee dalalka xifaaltanka uu muddo dheer ka dhaxeeyo Iiraan iyo Imaaraadka Carabta ayaa yeeshay wadahadalo dhif ah oo ay kawada hadleen arrimo kala duwan.
Sidda laga soo xigtay wakaaladda wararka u faafisa Imaaraadka ee WAM, wada-xaajoodyadda Sheikh Abdullah bin Zayed al-Nahyan iyo Mohammad Javad Zarif ayaa kawada arrin-saday qadiyadaha gobolka iyo caalamka.
Qodobadda sidda gaarka ah diiradda loogu saarey shirka waxaa kamid ah ka hortagga Covid-19 ee jilbaha dhulka u dhigay Bariga Dhexe.
Wakaaladda wararka WAM ayaa xustay in kulanka oo ku qabsoomay aalada maqalka iyo muuqaalka ay mas'uuliyiinta bilowgii is-dhaafsadeen salaam iyo hambalyo la xiriira munaasabadda Ciidul Adxaa ama Carafo.
"Sheikh Abdullah bin Zayed al-Nahyan wuxuu u sheegay dhigiisa Iiraan in ay ka go'an tahay xoojinta iskaashigada laba geesoodka ah ayna muhiim u tahay arrintaas xakameynta Covid-19," ayay WAM tibaaxdey.
Dhankiisa Zariif, wasiirka arrimaha dibadda Iiraan, ayaa Twitter-ka kusoo qoray in wadahadalka "si furan looga wadahadlay xalka laba geesoodka ah ee arrimaha labadda dal, tan gobolka iyo guud ahaan caalamka".
"Waxaan ku heshiinay in aan sii wadno wadahadalka ku saabsan mawduuca rajada - gaar ahaan maaddaama gobolku wajahayo caqabado adag, iyo xulashooyinka kale ee horteena yaala," ayuu soo qoray.
Imaaraadka, oo u dhow Sacuudiga iyo Mareykanka, ayaa xiisadda kala dhaxeysa Iiraan waxay salka ku haysaa arrimo ay kamid tahay barnaamijka Nuk-liyeerka ee Tehran, wallow si hoose u socdeen dedaalo nabadeyn ah.
Imaaraadka oo ciidamo cusub u tababaray Dowladda Soomaaliya
Soomaliya 01.11.2017. 18:44
Covid-19: Imaaraadka oo gargaar caafimaad ka dejiyey Muqdisho
Soomaliya 14.04.2020. 11:42